merolagani - प्रभु इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयर बाँडफाँड, कति कायम भयो कटअफ मूल्य ?
प्रभु इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयर बाँडफाँड, कति कायम भयो कटअफ मूल्य ?
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी (PRIN) को लिलामी सेयर शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलमा खोलिएको बोलपत्रमा साधारण सेयरको कटअफ मूल्य ४५१ रुपैयाँ कायम भएको छ । संस्थापक सेयरकाे कटअफ १७० रूपैयाँ कायम भएकाे छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले भदौ १७ देखि २४ गतेसम्म १५ हजार ८६१.७६ कित्ता संस्थापक सेयर र एक लाख २१ हजार १५४.८७ कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा ल्याएको थियो ।
इन्स्याेरेन्सकाे साधारण सेयरका लागि एक हजार १६ वटा र संस्थापक सेयरका लागि ३ वटा मात्र आवेदन परेको थियाे ।
साधारण सेयरका लागि अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्मको आवेदन परेको थियाे । एक आवेदकले १०० कित्ता सेयरका लागि सो मुल्यमा बोलपत्र पेश गरेका हुन् । त्यसैगरि अर्का एक अावेदकले पाँच हजार कित्ता सेयर न्यूनतम मूल्य १०० रूपैयाँमा समेत अावेदन गरेका छन् ।
त्यसैगरि संस्थापक सेयरका लागि १७० रुपैयाँमा आवेदन गर्नेले मात्र सेयर प्राप्त गरेका छन् ।
सानिमा बैंककाे ठूलो परिमाणकाे संस्थापक शेयर लिलामीमा, कारण यस्ताे
जेबिल्सको संस्थापक शेयर लिलामीमा आवेदन खुल्यो, इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग बिलय सम्झाैताले बिक्रीमा सहजता
नाडेप लघुवित्तको लिलामी शेयर सकार्ने मंगलबार अन्तिम अवसर
अक्सन मार्केट: दुई कम्पनीको दुई लाख ५० हजार कित्तामा लिलामी खुल्दै
महुली सामुदायिक लघुवित्तको ९ हजार ४५३ कित्ता शेयरमा लिलामी खुल्यो
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लिलामी हकप्रदमा बोलपत्र पेश गर्ने सोमबार अन्तिम